Inona no teknolojia nesorina tamin'ny smartphone? | Martech Zone
Hanomboka amin'ny tsingerintaona faha-10 an'ny iPhone izahay, natomboka ny 29 Jona 2007.
Tahaka ny psychopath maharesy lahatra rehetra, ny smartphone dia afaka mametraka eo alohan'izay tiana. Sariaka izy ireo, manampy ary toa tsy handratra lalitra. Mandritra izany fotoana izany dia mpamono olona mampalahelo izy ireo izay manisy famantaranandro fanairana amin'ny torimasony ary manome antoka fa tsy ho hita intsony ny rafitra GPS anao. James Pelton
Mendrika fotsiny raha handefa an'ity ny Alert Mobile Text Alerts mpamono olona Sary torohay: Killer serial finday - Ireo gajety novonoin'ny finday finday hankalazana ny fanjavonan'ny teknolojia marobe izay nomena sehatra mahatalanjona eo am-pelatanantsika. Ireto misy teknolojia 10 novonoina noho ny finday avo lenta
Alarm Clock - 61% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no milaza fa nanolo ny famantaranandrony ny findainy.
Watch - Ny fandefasana Smartwatch dia nandefa iraka famantaranandro swiss voalohany indrindra tamin'ny telovolana faha-4 2015.
Fitness Trackers - 58% amin'ireo mpampiasa finday avo lenta no nametraka fampiharana farafaharatsiny farafaharatsiny.
MP3 Players - Ny drafitra angon-drakitra sy serivisy mivantana amin'ny finday avo lenta dia nanjaka.
Fakan-tsary fakantsary sy tifitra - Ny finday avo lenta dia niisa maherin'ny 50% ny sary nozaraina nanomboka tamin'ny 2011, miaraka amin'ny fidinan'ny fakan-tsary fakan-tsary.
Camcorder - Miaraka amin'ny fakantsary, mitohy mitobaka ihany koa ny varotra camcorder.
GPS sy Sarintany - Ny fidiram-bolan'ny TomTom dia nilatsaka 2 / 3rds tao anatin'ny 2 taona, ary Google Maps dia manana mpampiasa 1 miliara (na dia misafidy aza aho Wiktionary).
Telefaona an-tanety - 41% ny trano tsy manana telefaona an-tariby intsony ary 100 sisa ny telefaona karama eto Hong Kong.
gazety - Ny smartphone dia nanolo ny gazety ho safidin'ny mpamaky ho an'ny lehilahy ao amin'ny trano fidiovana.
Gameboys - Ny vola miditra amin'ny lalao finday dia avo telo heny noho ny an'ny console console.
jiro - Rindrambaiko ankafizin'ny mpampiasa smartphone!
Adiresy boky - Novonoina tamin'ny alàlan'ny boky mifandraika izay mifanindran-dàlana amin'ireo mpifanerasera aminay sy ireo serivisinay rehetra amin'ny Internet.
Mpilalao horonantsary manokana - Miaraka amin'ny mozika, ny smartphone izao dia ny fahitalavitra azo entina. Ary ireo orinasa tariby dia mamaly, miaraka amina serivisy streaming.
Mpanoratra feo - tadidinao ny dictaphone? Na izaho koa aza.
Calculator - Fantatrao fa nampiasa azy io ianao mba hikajiana tendrony na roa.
kahie - Soraty ireo fampahatsiahivana sy naoty.
Photo Album - Efa nahita sarin'ny alikako, Gambino ve ianao? Mety manana 100 amin'izy ireo amin'ny iPhone aho.
Weather - Tsy ilaina ny mamadika ny vaovao, misy eo am-pelatanantsika ny Weather Channel.
Telefaona moana - Tsy moana ianao raha mampiasa telefaona atsinanana, mampanantena aho… fa tsy mifandray ianao.
Bebe kokoa - Mety ho hitantsika amin'ny ho avy fa ny taratra elektromagnetika (EMR) avoakan'ireo andrin-telefaona finday dia miteraka olana fanampiny amin'ny tontolo iainana…
Tags: adiresy bokyfamantaranandrofanaovana kajyCamcorderfakan-tsary +dictaphonetelefaona moanataratra elektromagnetikaemrfitaratra trackerjirogameboysGPSkilalao tananatelefaona an-tranotelefaona an-taribysarintanysari-mp3 mpilalaoMusic Playergazetykahiemandoa telefaonampilalao horonantsary manokanaraki-tsarytondroy ary tifirompitam-peomijeryWeather